အင်းဆက် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ပိုးမွှား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
Diversity of insects from different orders.
အင်းဆက် ဆိုသည်မှာ ခြင်၊ ယင်ကောင်၊ ပျားစသော ကျောရိုးမဲ့ ပိုးကောင်များကို ဆိုလိုသည်။ အင်းဆက်များသည် တိရစ္ဆာန်အုပ်စုများတွင် မူကွဲအများဆုံးဖြစ်ပြီး မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁ သန်းထက်မက ဖော်ပြထားကာ သက်ရှိဇီဝများအားလုံး၏ ထက်ဝက်မကသော ပမာဏကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အသစ်ပေါ်ပေါက်လာသော မျိုးစိတ်များမှာ ခန့်မှန်းခြေ ၆ သန်းမှ ၁၀ သန်းဝန်းကျင်ရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိသတ္တဝါများအားလုံး၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ အင်းဆက်များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးစိတ်အနည်းငယ်ခန့်သည် ပင်လယ်တွင်နေထိုင်ကြသော်လည်း အင်းဆက်များကို ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးနီးပါးတွင် တွေ့မြင်ရသည်။ အင်းဆက်အားလုံးနီးပါးသည် ဥမှ သားပေါက်ကြသည်။
၂။ အလင်းရောင်အာရုံခံ (အောက်)
၃။ အလင်းရောင်အာရုံခံ (အပေါ်)
၅။ ဦးနှောက် (ဦးနှောက်အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်း)
၃၁။ အစာမျိုပြွန် အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်း
၇။ ကျောဘက် သွေးလွှတ်ကြော
၈။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လေပြွန်များ (ခရုပတ်ပုံ လမ်းကြောင်းဖြင့်)
၉။ ရင်လယ် (ရှေ့တောင်ပံနှစ်ခုနှင့် တွဲဆက်ထားသည်)
၁၀။ ရင်အောက် (နောက်ပံနှစ်ခုနှင့် တွဲဆက်ထားသည်)
၂၇။ ရှေ့အူလမ်းကြောင်း (ပထမအစာခြေအင်္ဂါ))
၃၀။ တံတွေး ဂလင်း
၁၃။ ရှေ့အူပိုင်း (အစာအိမ်)
၁၆။ နောက်အူပိုင်း (အူမကြီး၊ အညစ်အကြေးစွန့် အူလမ်းကြောင်းနှင့် မစင်အိမ်)
၁၉။ အာရုံကြောမကြီး (ဝမ်းဗိုက်အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်း)
၂၀။ မယ်လ်ပီဂျီယံ ပြွန်များ (လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ဂုဏ်ပြုမှည့်ခေါ်ထားသည်)
၂၁။ ခြေချောင်း အမွေးနုနေရာ
↑ ၁.၀ ၁.၁ Chapman, A.D. (2006)။ Numbers of living species in Australia and the World။ Canberra: Australian Biological Resources Study။ ISBN 978-0-642-56850-2။9June 2009 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wilson၊ E.O.။ Threats to Global Diversity။ 20 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Low host specificity of herbivorous insects inatropical forest" (2002). Nature 416 (6883): 841–844. doi:10.1038/416841a. PMID 11976681. Bibcode: 2002Natur.416..841N.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Erwin, Terry L. (1997)။ Biodiversity at its utmost: Tropical Forest Beetles (PDF)။ pp. 27–40။9November 2018 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ 16 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ In: Reaka-Kudla, M.L.; Wilson, D.E.; Wilson, E.O., eds. (1997)။ Biodiversity II။ Joseph Henry Press, Washington, D.C.။ ISBN 9780309052276။
↑ Erwin, Terry L. (1982). "Tropical forests: their richness in Coleoptera and other arthropod species". The Coleopterists Bulletin 36: 74–75.
ဤ အင်းဆက်နှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်းဆက်&oldid=738232" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၅:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။